गुण्डाहरुको भर्तीकेन्द्र बन्दै नेकपा !
आषाढ़ २१ गते, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यस्तो चौतारो बन्दै गएको छ, जहाँ अहिलेका गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गे पनि अटाएका छन् र राज्य सत्ता उल्टाउन हिडेका विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताले पनि ठाँउ पाएका छन् । संविधान अपूरो भयो भनेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका तराई–मधेश केन्द्रित दलका नेता–कार्यकर्तालाई पनि नेकपाले फूलमाला लगाएर स्वागत गरेको छ।
देशमा कम्युनिष्टहरुले अधिनायकवाद ल्याउन थाले भनेर प्रशिक्षण लिएका काँग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई पनि नेकपामा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ। देशमा राजसंस्था चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्षता होइन, हिन्दु धर्म चाहियो भनेर सडक आन्दोलन गर्ने कमल थापाका कार्यकर्ता पनि नेकपाको चौतारोमा अटाएकै छन्।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १३ महिना भयो। अहिलेसम्म नेकपाले संगठनात्मक एकताको काम टुङ्गाएको छैन, जसको सिधा असर नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा परेको छ। आफ्नो गुटका मान्छेलाई राम्रो जिम्मेवारी चाहियो भनेर नेकपाका शीर्ष नेताको हानाथाप छ।
तर, ठीक यही बेला नेकपाले थरीथरीका मान्छे भित्र्यााएको छ। पार्टीमा प्रवेश गर्ने हरेक कार्यकर्तालाई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वसन छ –नवप्रवेशीलाई क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिइने छ, कुनै भेदभाव गरिने छैन।
एका तिर नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले नवप्रवेशीलाई एकपछि अर्को गरेर स्वागत गरि रहेका छन् भने अर्को तिर पार्टीमा जस्तो सुकै पृष्ठ भूमि भएका व्यक्तिलाई पनि भित्र्याएको भनेर आवाज उठ्न थालेको छ। हुन पनि नेकपामा कसलाई प्रवेश गराउने र कसलाई नगराउने भन्ने कुनै विधि छैन। प्रवेश गर्न चाहने जोकोहीले नेकपामा स्वागत पाउँछन्। त्यसैले होला स्वार्थपूर्ति गर्न मानिसहरु नेकपा प्रवेश गरेको भनेर नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले खुबै आलोचना गरेका छन्। जस्तो कि दीपक मनाङ्गे नेकपामा प्रवेश गरेपछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘राजनीतिक पार्टीलाई मान्छे त चाहिन्छ नै तर कस्ता मान्छे ? कस्ता कस्ता ल्यायौँ ? कस्ता कस्ता ल्याउँदै छौँ ? परिणाम के भैरहेको छ ? राम्ररी विचार गरौ है !’
यस्तै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानलेले पार्टी भित्र अनेकौँ दीपक मनाङ्गे रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अनगिन्ती मनाङ्गे पार्टीमा पहिल्यै छन्, थिए। एउटा थपिएको मात्र हो। जाबो एउटा मनाङ्गे थपिँदा के को कोकोहोलो हो कुन्नी ?’
मनाङ्गे बिहिबार नेकपामा प्रवेश गरेका थिए। मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा विजयी भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मनाङेलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टी प्रवेश गराए। ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण उनले शपथ लिन पाएका थिएनन्। उनी करिव ८ महिना जेल बसे। पछि सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनी छुटेका थिए। र उनले २०७५ माघ १४ गते प्रदेश सभा सांसदको सपथ लिएका थिए।
नेकपामा प्रवेश गर्नेहरुलाई कहिले पार्टी कार्यालयमा त कहिले अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा कार्यक्रमको आयोजना गरेरनै स्वागत गर्ने गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म कुन पार्टीबाट कति व्यक्ति नेकपामा प्रवेश गरे भन्ने तथ्याङ्क नेकपाको पार्टी कार्यालयमा छैन। न त नेताहरुसँगनै छ । तर पनि नेकपामा प्रवेश गर्ने र गराउने क्रम चलि रहेको छ।
को–को प्रवेश गरे ?
शुक्रबार समाजवादी पार्टी नेपालका केही नेताहरु नेकपामा प्रवेश गरे। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहिमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेरनै उनीहरुलाई पार्टी प्रवेश गराए। पार्टी प्रवेश गर्नेमा पूर्वमन्त्री कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुली, मनु हुमागाँई, पूर्व सांसद गुणाखर बस्याल लगाएतका नेता नेकपामा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरु तत्कालिन माओवादीबाट नयाँ शक्तिमा गएका थिए। नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता पछि असन्तुष्ट बनेका उनीहरु अहिले नेकपामा प्रवेश गरेका हुन्।
०७५ असोज ९ गते नेपाल टेलिभिजनका पूर्वअध्यक्ष महेश दाहाल नेपाली काँग्रेस छाडेर नेकपामा प्रवेश गरेका थिए। उनलाई पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर नै अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताले नेकपामा प्रवेश गराएका थिए। दाहाल नेपाली काँग्रेसको युवा सङ्गठन नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लगायतको भातृ सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर लामो समयसम्म काम गरेका थिए। उनलाई नेकपा नेतृत्वका सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरेको छ। नवप्रवेशि दाहाल राजदूतमा सिफारिस भएसँगै नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
०७५ भदौ १ गते काँग्रेस ओखलढुङ्गाका ६६ जना नेता–कार्यकर्ता एकै पटक नेकपामा प्रवेश गरे। प्रवेश गर्नेमा काँग्रेस ओखलढुङ्गाका पूर्वसचिव तथा पूर्वजिविस सदस्य रामबहादुर खत्री, वर्तमान जिल्ला कमिटी सदस्य सुरेश सुनुवार, खिजीकाती गाउँ कमिटी सभापति तथा पूर्वगाविस अध्यक्षहरू रेवतकुमार सुनुवार र लालप्रसाद नेपाल, गाउँ पार्टी सभापति गजेन्द्रबहादुर बस्नेत, पूर्वगाउँ सभापति चकेन्द्र दास सुनुवार, उपाध्यक्षहरू होमबहादुर सुनुवार, अमरबहादुर खत्री, सचिवहरू केशरकुमार सुनुवार, चूडाप्रसाद पौडेल, कोषाध्यक्ष मञ्जुकुमारी विक, काँग्रेस श्रमिक सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष ताराधन सुनुवारलगायत नेकपामा प्रवेश गरे। उनीहरूलाई पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पार्टी प्रवेश गराएका थिए।
०७५ भाद्र १६ मा नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीको गणतान्त्रिक खेलकूदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिमला संग्रौला, भ्याली ब्यूरो सदस्य रामप्रसाद घिमिरे, काठमाडौं जिल्ला सदस्यहरु डिल्लीराम थपलिया, गोपाल खरेल, भक्तपुर जिल्ला सदस्य राजराम लाथेजु, काठमाडौं जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट माधव लामिछाने र विष्णु तिमल्सेना नेकपामा प्रवेश गरे। उनीहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो निवास खुमलटारमा पार्टी प्रवेश गराएका थिए।
त्यस्तै ०७५ असोज १५ गते राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष भरत साह, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष नागेश्वर साहलगायतका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर नै महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी प्रवेश गराए।
०७५ पुस १६ मा नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीकोे विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य राजन राईको नेतृत्वमा २२ नेता कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश गरे। उनीहरुलाई प्रचण्डले आफ्नो निवासमा कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टी प्रवेश गराएका थिए।
०७५ माघ ५ मा नेपाली काँग्रेसका पूर्वसांसद तीर्थराज भूसाल काँग्रेस परित्याग गरी नेकपामा प्रवेश गरे। भूसाल २०४९ सालमा नेपाली काँग्रेसको चितवन जिल्ला सभापति भएका थिए। त्यस्तै २०५० सालमा राष्ट्रिय सुकुम्बासी अयोगका अध्यक्ष र २०५१ सालको आम निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचित भएका उनी काँग्रेसमा सक्रिय थिए। उनलाई पनि नेकपाको पार्टी कार्यालय धूम्वाराहीमा औपचारिक कार्यक्रमनै गरेर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी प्रवेश गरेका थिए।
०७६ जेठ १९ मा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री पदम राई नेकपामा प्रवेश गरे। उनी २०६४ को सविंधानसभा निर्वाचनमा भोजपुरबाट विजयी भएका थिए। राई भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात राज्यमन्त्री समेत भएका थिए। राईलाई पनि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी प्रवेश गराए।
०७६ वैशाख २५ गते तत्कलीन नयाँ शक्तिकी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद सीमा विक नेकपा प्रवेश गरिन्। उनलाई नेकपाको पार्टी कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी प्रवेश गराएका थिए।
०७६ असार ४ गते विभिन्न जिल्लाका सामाजिक परिचालिकाहरु नेकपामा प्रवेश गरे। उनीहरुलाई प्रचण्ड निवास खुमलटारमा प्रचण्ड, स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पार्टी प्रवेश गराएका थिए। जागिरको सुरक्षा, उचित तलबको व्यवस्था र राजनैतिक अधिकारको माग नेकपाले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने भन्दै १४ जना सामाजिक परिचालिका नेकपामा प्रवेश गरेका थिए।
यसरी अन्तत : नेकपाले गरेको काम र विभिन्न घटनाक्रलाई हेर्दै जाने हो भने नेकपा पार्टी नभईकन गुण्डाहरुलाई संरक्षक गर्ने कारखाना बन्दै गएको छ। भर्ती केन्द्र जस्तो देखिएको छ सिङ्गो नेकपा पार्टी।